Wakiilka Lavezzi oo maanta la kulmaya kooxda Chelsea! – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya talyaaniga wakiilka weerar yahanka kooxda PSG ee Ezequiel Lavezzi ayaa kulan la qaadan doona maanta masuuliyiin ka socota kooxda Chelsea.
Sky Italia ayaa daaha ka qaaday in wakiilka Ezequiel Lavezzi uu maanta magaalada London kula kulmi doono kooxda Chelsea si uu ugala hadlo suurto galnimada uu laacibka reer Argentina ugu soo dhaqaaqi karo galbeedka London bishaan janaayo.
Ezequiel Lavezzi ayaa doonaya inuu dib ugu laabto horyaalka talyaaniga laakiin sida muuqata Man United iyo Chelsea ayaa ku cadaadinaya PSG inay ka iibiso laacibka reer Argentina.
Qandaraaska Ezequiel Lavezzi ayaa ku eg dhamaadka xiliciyaareed kaan waxaana jira in maamulka kooxda PSG ay doonayaan inay iska iibiyaan bishaan janaayo si xaggaaga uusan bilaash uga tagin kooxda.